प्रतिगमन जिरो माइल !
नेकपा दाहाल–नेपाल गुटकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले हालै दिएको एमसीसी समर्थनको अभिव्यक्ति र भावी राष्ट्रपतिका लागि योजनै बनाएर लागेका दाहाल–नेपाल गुटका नेता झलनाथ खनालले त भन्न पनि भ्याइसकेछन् –‘मलाई राष्ट्रपति बनाइयो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कसको हो भन्नेबारे निर्णय सुनाउने भएको छ । ऋषिराम कट्टेलले नेकपा नाममा दावी गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा नेकपा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार
लाभको लेखाजोखा गर्दै देउवाः जसको प्रस्ताव फलदायी, उसकै अनुयायी !
रोमन आचार्यकाठमाडौं । ज्योतिषीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भन्ने भनाइ अहिले खुबै चर्चामा छ । ज्योतिषीको भविष्यवाणीमा विश्वास गर्ने देउवालाई बदलिएको राजनीतिले पाँचौंपटक
अबको राजनीति संसद् केन्द्रीत, यसरी बुझ्नुस् संसदभित्रकाे अंकगणित
अक्कल कुँवरकाठमाडौं । अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीनामा दिनुहुन्छ कि संसदको सामना गर्नुहुन्छ एकिन हुन सकेको छैन
संसद् बैठकअघि राजीनामा दिएर आत्मालोचना गरे पार्टी एकता सम्भव– प्रवक्ता श्रेष्ठ
काठमाडौं । दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर आत्मालोचना गरेको खण्डमा पार्टी एकताको सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । स्थायी समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी
सर्वोच्चको फैसला आउनेबित्तिकै ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो– बामदेव गौतम (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मआलोचना गर्दै राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको निर्णय अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाएपछि
सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ– अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जनयुद्धको हस्ताक्षर’ पुस्तक विमोचन
ढुक्क हुनुस्, निर्वाचन हुन्छ– ईश्वर पोखरेल
फागुन १० । उपप्रधानमन्त्री एवं ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ । बाहिर अनेक हल्ला फिजाएपनि समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न
संसद् विघटनको कदम सर्वोच्चबाट सच्चिनुपर्छ– रघुजी पन्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभा(संसद्) विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतबाट सच्चिनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा
अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम कर स्थगित गर्न आह्वान